5. Kufanele Ukholwe Kanjani KuNkulunkulu Ukuze Usindiswe futhi Upheleliswe? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Umuntu ofuna ukupheleliswa uNkulunkulu, kumele aqale aqonde ukuthi kusho ukuthini ukupheleliswa uNkulunkulu, kumele abe kuziphi izimo ukuze apheleliswe uNkulunkulu, bese efuna umgudu azohamba kuwo uma esezazi lezo zinto. Umuntu kumele abe nobuntu obuthile ukuze apheleliswe uNkulunkulu. Abaningi abanabo ubuntu obudingekayo, okudinga ukuthi umuntu asebenze kanzima futhi okudinga ukuthi umuntu azikhandle. Labo abanobuntu obungatheni, kufanele bazabalaze kakhudlwana. Lapho kwanda ukuqonda kwenu amazwi kaNkulunkulu yilapho niwenza nakakhulu khona, yilapho nishesha khona ukungena endleleni yokupheleliswa uNkulunkulu. Ngomthandazo, ungapheleliswa endaweni yomthandazo; ungapheleliswa futhi ngokudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ukubamba isiqu samazwi kaNkulunkulu, nokuphila ngamazwi kaNkulunkulu, ningapheleliswa. Ngokuzwa amazwi kaNkulunkulu usuku nosuku, kufanele wazi ukuthi yini engekho kuwe; ngaphezu kwalokho, kufanele ububone ubuthakathaka bakho obubulalayo nezindawo ontekenteke kuzo, futhi uthandaze unxuse kuNkulunkulu. Ngokwenzenjalo, uyopheleliswa kancane kancane. Izindlela zokupheleliswa: umthandazo, ukudla nokuphuza amazwi kaNkulunkulu, ukuqonda ingqikithi yamazwi kaNkulunkulu, ukungena ekwazini amazwi kaNkulunkulu, ukwazi izinto enintula kuzo, ukulalela umsebenzi kaNkulunkulu, ukwazi umthwalo kaNkulunkulu nokushiya inyama ngothando lwakho lukaNkulunkulu, nokuhlangana njalo nabafowenu nodadewenu, okucebisa isipiliyoni senu. Kungaba ukuphila okuhlanganyelwayo noma ukuphila kwakho, kungaba imihlangano emikhulu noma emincane, konke kungakwenza uqongelele isipiliyoni nokuqeqeshwa, ukuze izinhliziyo zenu zibe nokuthula phambi kukaNkulunkulu futhi zibuyele kuNkulunkulu. Yonke lena inqubo yokupheleliswa. Ukwazi amazwi kaNkulunkulu engikhulu[pme ngawo kusho ukuwanambitha ngempela amazwi kaNkulunkulu futhi uvumele amazwi kaNkulunkulu aphile kuwe ukuze ube nokholo oluthe xaxa futhi uthande uNkulunkulu. Ngale ndlela, uyosixosha kancane kancane isimo esikhohlakele sobusathane, uyoziphambukela kancane kancane ezinhlosweni ezingafanele, uphile njengomuntu ojwayelekile. Ukukhula kothando lukaNkulunkulu ngaphakathi kini—okusho ukuthi, ukupheleliswa kweningi lenu uNkulunkulu, ayancipha namathuba okonakaliswa kwenu uSathane. Siyazibonga izinto ezingokoqobo, nizongena kancane kancane endleleni yokupheleliswa. Ngakho, uma nifisa ukupheleliswa, ukwazi ngentando kaNkulunkulu, nokwazi amazwi kaNkulunkulu kubaluleke kakhulu.
Ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu, uPetru wayefuna ukwanelisa uNkulunkulu kukho konke, wayelalela konke okuvela kuNkulunkulu. Engakhonondi ngisho nakancane, wakwazi ukwamukela ukusolwa nokwahlulelwa, kanye nokucwengwa, usizi kanye nokuntula ekuphileni kwakhe, okungekho kukho okwakungaqeda ukuthanda kwakhe uNkulunkulu. Ingabe lolu kwakungekhona ukuthanda kakhulu uNkulunkulu? Ingabe lokhu akukhona ukugcwaliseka komsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu? Noma kusekusolweni, ekwahlulelweni, noma osizini, uhlale ukwazi ukulalela kuze kube sekufeni, futhi yilokhu okufanele kufezwe isidalwa sikaNkulunkulu, lobu ubumsulwa bokuthanda uNkulunkulu. Uma umuntu engafeza okungaka, kusho ukuthi uyisidalwa sangempela sikaNkulunkulu, futhi akukho okungcono okwanelisa isifiso soMdali.
Uma abantu befuna ukuba izidalwa eziphilayo, nokufakaza kuNkulunkulu, nokwamukelwa nguNkulunkulu, kumele bamukele insindiso kaNkulunkulu, kumele bazithobe ngenjabulo ekwahlulelweni nasekusolweni Nguye, futhi kumele ukuthenwa nokusetshenzwa nguNkulunkulu. Yilapho kuphela abangakwazi ukuba nalo lonke iqiniso elifunwa uNkulunkulu ukuba lisebenze, futhi yilapho bezothola khona insindiso kaNkulunkulu, futhi baphinde babe izidalwa eziphilayo.
Labo abangamlaleli nhlobo uNkulunkulu, abavuma nje igama Lakhe kuphela, abanolwazana ngobuhle nokuthandeka kukaNkulunkulu kodwa abengahambisani nezinyathelo zikaMoya oNgcwele, futhi abangalaleli umsebenzi namazwi amanje kaMoya oNgcwele – labo baphila phakathi komusa kaNkulunkulu, futhi abayikuzuzwa bapheleliswe nguNkulunkulu. UNkulunkulu uphelelisa abantu ngokulalela kwabo, ekudleni, ekuphuzeni, kanye nasekuthakaseleleni amazwi kaNkulunkulu, nasenhluphekweni nasekwehlelweni ukucwengwa ezimpilweni zabo. Kusekukholweni okunjalo kuphela lapho izimo zabantu zikwazi khona ukuguquka, kulapho kuphela bethola khona ulwazi lwangempela ngoNkulunkulu. Ukungeneliswa ukuphila emuseni kaNkulunkulu, ngokuzimisela bomele iqiniso, nokufuna iqiniso, nokufisa ukuzuzwa nguNkulunkulu – yilokhu impela okuchaza ukulalela uNkulunkulu; yilolu ncamashi uhlobo lokukholwa alufunayo uNkulunkulu.
Okwedlule: 4. Ukubaluleka Komsebenzi KaNkulunkulu Wokuvivinya Nokucwenga
Okulandelayo: 1. Kuyini Ukuba Sesimweni Somuntu? Iyini Ingqikithi Yokuba sesimweni Somuntu?